downloads 5 615
Lee otu onye nke helicopters ji site German uwe ojii. A mara mma nlereanya, mere nke ọma, na a nnọọ ọtọ kokpiiti.
The EC135 ìhè ejima-engine helikopta bụ a vasatail emepụta site Eurocopter.
Ọ bụ ihe na evolushọn nnọọ setịpụ nke MBB BO105 nke hụrụ a n'ihu mmepe na 1980s (aha ya bụ Bo 108) tupu ịmalite ife nanị dị ka a demonstrator maka nkà na ụzụ ọhụrụ.
Nke a karịsịa prototype ama onwem na FBW (FBW) na a isi rotor articulations nke a ọhụrụ ụdị, n'otu aka mbenata kacha ụzụ na omume ọma jijiji na-eme ihe ike ọgwụgwụ inye ndị ọzọ uru na okwu nke kraiptographi na responsiveness.
N'oge e kere eke nke Eurocopter na 1992, MBB ada na agbamakwụkwọ maka BO108 nke ahụ hụrụ n'oge Ohere na ahịa. The French akụkụ nke Eurocopter (bụbu helikopta nkewa nke Aérospatiale-Matra otu) me ya n'akụkụ ọdụ rotor ụdị fenestron-enye ohere a n'ihu Mbelata mkpọtụ ozo na-eweta oké uru site na ele ihe anya nke nchebe dị n'ala.
The mbụ ụgbọ elu weere ọnọdụ na Ottobrunn nso Munich (ụlọ ọrụ na n'ichepụta prototypes) February 15, 1994. Production usoro (Donauwörth) malitere na 1996. The isi nlereanya abịa na ọtụtụ nsụgharị nkịtị na ndị agha (EC635 (en)).
Ọ bụ na osa na EC145 helikopta otu na-amanye ndị French National Gendarmerie. (Wikipedia)
Onye edemede: Heiko